Jumlo 90cm Dhalo Dhaqameed Curved Island Hood 803 Soo-saare iyo Alaab-qeybiye | ARCAIR
Qalajiyaha Saxanka & Makiinada weelka
90cm Dhaqameed Curved Glass Island Hood 803
Jaziiradaha muraayadaha qalloocan ee 90cm ee dhaqameed waxay si hufan u qabtaan qiiqa iyo dufanka.
Matoorka soo saarista badan ee leh xakamaynta sanqadha hoose ee batoonka riixitaanka 3 xawaaraha.
Nalka LED-ka ee badbaadiya tamarta ayaa sii shaqaynaysa in ka badan 10,000 saacadood Makiinada weelka lagu dhaqo oo ammaan ah filter aluminium.
2 Qaababka Hawo-qaadista: Dib ugu wareejinta gudaha iyada oo leh filtarrada kaarboonka (kuma jiraan) iyo Ku-meelaynta bannaanka oo leh suudhka tuubada tuubada ee aagga cunto karinta ee kala duwan.
90cm 90cm galaas dhaqameed qaloocsan oo daboolan daboolka alaabtan oo ku habboon jikada furan taas oo ah naqshad caan ah oo lagu biiri karo qolka fadhiga oo leh matoor awood leh ayaa u oggolaanaya ilaa 1000m3 / saac soo saarista waxay ka saari kartaa xaddi badan oo qiiq ah iyo urta karinta si fudud hawada. Matoorka badbaadinta tamarta iyo xoogga leh wuxuu heli karaa A++ (aad u hufan) ilaa E (waxqabad yar) u hoggaansanaanta jihada EU, go'aaminta baahidaada.
Dhawaaqa aadka u hooseeya ee daboolka ma dhibi doono wada hadalka dadka wax karinaya xitaa xawaaraha ugu sarreeya. Kontoroolka makaanikada oo ay fududahay in lagu shaqeeyo oo leh 3 xawaarood oo loogu talagalay noocyada cunto karinta ee kala duwan, ka dhig jikadaada mid cusub & ammaan si aad ugu raaxaysato wakhtiga karinta ee qoyskaaga.
Shaandheynta dufanka aluminium ee la dhaqi karo inta badan qabashada oo tirtirto urta karinta, rakib aad u fudud oo beddelo.
Iyada oo leh xulashooyin dabacsan oo u dhexeeya dib-u-wareejinta ama daalka hawada tooska ah:
1. Habka dib-u-wareejinta: filtarrada dhuxusha waa lagama maarmaan haddii aaggaaga aan loo oggolaan in lagu rakibo tuubada qiiqa dibadda. daboolka jasiiradda, waxaan had iyo jeer soo jeedinaynaa in lagu isticmaalo habka dib-u-wareejinta. Alaabtayadu kuma jiraan shaandhada dhuxusha laakiin waxaan ku siin karnaa qaybo dheeri ah oo aad si fudud u iibsan karto oo aad ku rakibi karto laftaadu.
2. Habka daalinta tooska ah ee hawada: Waxaa loo istcimaalaa sidii daboosha hawo-mareenka oo leh tuubo tuubo oo dhexroorkeedu yahay 150mm. Dhuumaha 2M ee ku jira alaabtayada iyo haddii aad u baahan tahay inaad bedesho ka dib isticmaalka wakhti dheer, way sahlanaan doontaa inaad ka iibsato dukaanka alaabta dhismaha laakiin kaliya dooro dhexroorka saxda ah 150MM.
4 * 2W tamarta LED nalka rakibaadda hoose ee guddiga daboolka, si wax ku ool ah ayaa kuu iftiiminaya goobta shaqada si aad si fiican u aragto markaad wax karineyso oo waxay noqon kartaa iftiin mugdi ah. LED waa sahlan tahay in la beddelo oo waxay sii wadi kartaa shaqada in ka badan 10,000 saacadood
Koofiyadaha jasiiradda qalooca ayaa ku dul laalaada saqafka, oo lagu qurxiyey dherer lagu hagaajin karo qiiqa 600+600MM. Waxay u baahan tahay rakibo dadka xirfadlayaasha ah.
Hoods kariyaha xaglaha ah
Noocyada Hood ee ugu Fiican
Hood kariyaha madow
Hood kariyaha Canopy
Hood Kaarboon Filter-kaar
Saqafka Buur Rangehood
Hoods Cooker Chimney
Hood kariyaha Nadiifi
Xirmada Duubista Kabaha
Hood kariyaha E14 nalalka
Soosaariyaha Hood kariyaha
Taageere Hood kariye
Taageere Hood kariyaha
Shaandhaynta Hood kariyaha
Hood ku habboon karinta
Dhererka Hood Cooker
Rakibaadda Hood kariye
Cooker Hood Iftiinka Led
Matoorka Hood Cooker
Dhuumaha Hood Cooker
Mashiinnada Hood Spare Parts
Hood Range-la'aan ah
Hoods Cooker Island
Daboolka Range Hood
Gelida Hood Range
Hood kariyaha oo dib u wareega
Noocyada Hoodka kariyaha
Hoosta Range Hood
Qalab: Inox Aisi 430+Muraayad kulul
Socodka hawada: 750 m³/h
Nooca Baabuurka: 1x210W
Nooca xakamaynta: batoonka riix
Iftiin: 4x2W iftiinka LED
Nooca filter: 2pcs Alu filter
Fidinta Chimney: 600+600mm
Soodejinaya QTY(20/40/40HQ): 66/144/191(90cm)
Qalabka: Inox Aisi 304/Rinji cad/madow/brown
Qii Gray galaas xanaaqsan
Bedel: Badhanka koronto ku shaqeeya
Matoorka: 1000m3/h, 650/900m3/h matoorka DC
Shaandhee: Baffle/Dhuxusha/Filterka VC
Koodhka Slim T Shape Island ee caadiga ah 802
Dhamaadka sare ee T-qaabka buuxa ee LED Panel Island hood 810
Hood Cooker Island ee Naqshadeeyay 807
90cm Dhaqanka Slim Curved Glass Island Hood 809
90cm Flat Galat Island Hood 801
Hood Cooker Island Awood leh 822A